‘Sibulawa ukungazi kahle ngeComrades’ | Isolezwe
‘Sibulawa ukungazi kahle ngeComrades’
Isolezwe / 1 June 2012, 11:57am /
USimphiwe Mbatha wakwaMashu elungiselela umjaho wecomrade marathorn ozokuba kulenya ezoqala ISITHOMBE BONGANI MBATHA ISITHOMBE BONGANI MBATHA
UKUGQOZA kolwazi nezinsiza yikona okumi phakathi kwabamnyama bakuleli nokuzidlela amahlanga kuComrades Marathon.
Lokhu kushiwo uSimphiwe “Strongman” Mbatha ozobe egijima okwesithupha kulo mjaho omkhulukazi ozobe usuka eMphithi ubheke kwelikaBhanana.
UMbatha (36) uqhamuka nalo mbono nje, akasayisebenzisi imoto yakhe uma eya emsebenzini lapho ephethe khona ithimba labahlanza isikole iThomas More College eseKloof, entshonalanga yeTheku.
Uthi okwenza ashiye imoto yakhe kubo KwaMashu ukuthi usenza amalungiselelo okugcina ngaphambi kwalo mjaho athembise ukwenza kahle kuwona ngokwesikhathi.
UMbatha ongaphansi kweKwaMashu Athletic Club kodwa angaziqeqeshi nayo ngenxa yokuxinwa wumsebenzi, usephumelele ukuthola izindondo ezine zethusi neyodwa yeBill Rowan emijahweni eyisihlanu aseyigijimile empilweni yakhe.
Ngokwezikhathi zeComrades indondo yethusi uyithola uma wenze isikhathi esingaphezulu kancane kwamahora ayisishiyagalolunye kanti iBill Rowan ichaza ukuthi usuke ungene esikhathini esingaphezulu kancane kwamahora ayisikhombisa nesigamu.
“Angiqondile khona ukudelela kodwa kuyiqiniso elingenakuphikiswa ukuthi umuntu omnyama uqinile kunomhlophe ngokwendalo. Ukube iComrades igijinywa ngokwamandla kuphela ngabe abamnyama bayazenzela kodwa ngoba abanalo ulwazi olwanele ngalo mjaho, bahlala njalo besalele emuva. Engikufisayo ukuthi abantu bakithi bathole ulwazi ngendlela yokuphatha imizimba yabo, izinto okufanele bazidle ngokunjalo nezindlela kanye nezinsiza zokuziqeqesha ngendlela uma bezimisele ngokwenza kahle kuComrades,” kusho uMbatha.
Lo msubathi oseneminyaka engaphezulu kwengu-20 ekulo mkhakha uthe uStephen Muzhingi uyisibonelo esikahle ngalokhu akushoyo kwazise ubenganakiwe zolo lokhu kodwa uthe angathola iqembu elinolwazi ngakho konke okufanele akwenze, wayinqoba ilandelana iComrades.
“Ngiyakhuthazeka njalo uma ngimbona enza kahle uMuzhingi ngoba isimo sakhe sithi kasifane nesami. Ngiziqeqesha ngedwa ngaphandle kokwesekwa njengoba naye kade enza eminyakeni edlule. Nezikhathi engizenzayo zithi kazifane nebezenziwa nguyena ngesikhathi engakanakwa, ngakho-ke nginethemba lokuthi nami ngiyofika ezingeni lakhe. Ngiyakuqonda futhi ukuthi kufanele ngisebenze kakhulu bese ngiyaqhubeka nokuphatha kahle umzimba wami uma ngifuna ukufeza iphupho lami lokufana naye.”
Ezinye zezinto uMbatha aziqeqeshela ngazo iComrades iThomas More College 80km Long Walk eba ngoMashi minyaka yonke. Lo mjaho osuka eKloof udlule ezindaweni ezihlanganisa iHillcrest, Bothas Hill nase-Assagay uMbatha usewunqobe iminyaka emihlanu ilandelana.
“Ngingumuntu ongakwazi ukuhlala ngaphandle kokuzivocavoca osekwenza abangani bami bahlale njalo bengichwensa ngokuthi ayikho into engiziqeqeshela yona ekubeni kuComrades ngishiwa ngamantombazane angamawele aseRussia,’’ kusho uMbatha.